Vaovao - Shower Panel VS Head shower nitazona tanana
Shower Panel VS Toro-pahefana mitazona tanana
Raha ny marina, ho an'ny mpiasan'ny birao, ny fomba tsara indrindra mankaleo amin'ny andro be atao dia ny fandroana mafana rehefa mody. Ka rehefa tonga eonandro, avy eo tsy maintsy miresaka momba ny fitaovam-pandroana isika, satria izao nihatsara ny fari-piainan'ny olona, ​​niova koa ny fomba fiainan'ny olona, ​​ka nanjary niovaova be ny fitaovana fandroana. Matetika aho no mampiasa betsaka ao an-trano dia nyfandroana lohany, fa raha ny tena izy, ankoatry ny fandroana dia misy vokatra classy kokoa, dia ny fandroana tontonana. Raha ampitahaina amin'ny fandroana nentim-paharazana, ny fandroanatontonana manana atmosfera avo lenta. Izany fotsiny fa tsy ny olon-drehetra no mankafy azy. Ary ny olona sasany amin'ny haingon-trano amin'ny fandroana, ho an'ny fandroanatontonana sy fandroana lohany izay tsara kokoa, dia mahatsapa fa tsy mahavita mitsara marina. Ka anio isika hahita ny fomba hisafidianana ireo roa ireo!
Ny endri-javatra lehibe indrindra amin'ny fandroana tontonana dia ny fisehoany tena tsara bika, ary manome ny olona fahatsapana ho lava. Ary amin'ny fampiasana ny fizotrany dia mety, ary mety ho tsara tokoa hisorohana ny famafazana. Ary fandroana avo lentatontonanas koa dia manana asa maro, toy ny fampidirana hafanana eo no ho eo, ny mari-pana tsy tapaka manan-tsaina, ny fanorana, izay afaka mifanaraka amin'ny ilain'ny olona samihafa. Ary ny olan'ny fahabetsahana sy ny fibodoana be ny tany dia voavaha mandritra ny fametrahana azytontonana somary lafo ihany koa. Ohatra, amin'ny resaka vidiny, ny zavatra avo lenta toy izany dia tsy maintsy lafo kokoa noho ny fitaovana fandroana mahazatra. Ny firafitry ny fandroanatontonana dia sarotra kokoa noho ny firafitry ny fandroana, koa raha misy fahasimbana na tsy fahombiazana amin'ny dingan'ny fampiasana dia manahirana kokoa ny manamboatra azy.
Raha ny marina dia mampiasa tànana ny ankamaroan'ny fianakaviana loha loha, indrindra satria ny vidin'ny tanana loha loha dia mora vidy ihany, ary somary miteny, ny fametrahana ihany koa tena tsotra. Mazava ho azy, misy karazany maro ny tananaloha loha, ka mety amin'izy ireo koa efitra fandroana samy hafa habe. Ity karazana fandroana ity koa dia tena mety ampiasaina, ary ny tsindry rano ilaina dia kely ihany, ka mamonjy rano. Na izany aza, manana ny tsy fahampiana manokana ihany koa izy, izany hoe mety tsy dia be loatra ny asany, ary rehefa avo ny tsindry, dia hiteraka famafazana rano mora foana, ka mando be ilay efitrano.
Ka raha ny tena izy, raha tsy mahay misafidy amin'izy roa ianao dia afaka misafidy mifanaraka amin'ny haben'ny efitra fandroana ary ny zavatra ilainao manokana. Na dia ny fiasan'ny fandroanatontonana tena betsaka noho ny an'ny fandroana an-tànana, tsy midika izany fa mila ny asany rehetra isika. Indrindra raha misy ny be antitra sy ny ankizy ao an-trano fotsiny ary tsy dia fantany loatra ny momba azy io, dia tsy miasa ireo fiasa ireo, ary tsy ilaina ny mividy azy ireo ao an-trano.
TOERANA farany teo